App ကို Locker လက်ဗွေ & Password ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » App ကို Locker လက်ဗွေ & Password ကို, ပြခန်း Locker
App ကို Locker လက်ဗွေ & Password ကို, ပြခန်း Locker APK ကို
ဒါကဖုန်း pin ကိုနှင့်ပုံစံ password ကိုအတူအကောင်းဆုံး app ကိုသော့ခတ် apps များဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပြခန်းရုပ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို lock ကူညီပေးသည်သည့်ပြခန်း Locker ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံများ, အဖြစ်အလုပ်ဖြစ်တယ်, သင့် library.In အထူးခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ access ကိုတားဆီး, သင် app ကို Locker လက်ဗွေရာနှင့် password သို့မဟုတ် PIN ကို set up နိုင်ပါတယ်။ App ကိုလုံခြုံရေးသော့ခတ်သင်တို့အဘို့ 100% privacy ကိုအာမခံပါလိမ့်မယ်။
လျှောက်လွှာသော့ခတ် app ရဲ့ Key ကိုအကြိုးကြေးဇူးမြား *
- လက်ဗွေသော့ခတ် app ကိုဝှက်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို apps များ
- သင့်လူမှုကွန်ရက် applications များ၏ 100% လျှို့ဝှက်
- ရေနှင့် App ကိုပုံစံသော့ခတ်
- App ကိုသော့ခတ်သတင်းစကား
-3Re-သော့ခတ် Options ကို: Re-သော့ခတ်ဖြတ်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်ပိတ်မျက်နှာပြင်, နှောင့်နှေးသော့ခတ်ရန်
-2options များနှင့်အတူအဆင့်မြင့်သော့ခတ်မုဒ်: ကျပန်း Keyboard ကိုနှင့်ဖျောက်ပုံစံမဲနှိုက်လမ်းကြောင်းကို
Pin ကုဒ်, စံနမူနာနှင့် app ကိုသော့ခတ်လက်ဗွေ: -3Modes သာသော့ဖွင့်
- ရိုးရှင်းသော UI ကိုအသုံးပြုသူမှအဆင်ပြေတတ်၏
- သန့်ရှင်း junk နှင့်သင့်ဖုန်းကိုပိုကောင်းအောင်
- အခမဲ့လျှောက်လွှာ Locker နှင့်ပြခန်း hider
စကားဝှက်ကိုအတူလျှောက်လွှာ Locker ၏အဓိကသော့ချက်များ *
 App ကို Locker လက်ဗွေ & pin ကို *
ဗီဒီယို Locker apps များစတင်ရန်, သင်သော့ခတ်လိုသောအားလုံးဖုန်း app တွေထွက်စစ်ဆေးပါ။ တစ်ခုတည်းထိတွေ့နှင့်အတူ, သငျသညျမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပြခန်း, သော့ခတ်ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်, အဆက်အသွယ်သော့ခတ်, လက်ဗွေရာနှင့်အတူသော့ခတ် apps များနှင့်ပိုပြီးသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအံဆွဲမာစတာ apps နှင့်အတူသင့်ရဲ့ privacy ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာပြင်သော့ခတ်သည် Modes3ပေးသည်: Pin, လက်ဗွေနှင့်ပုံစံအတွက် app ကိုသော့ခတ်။
app ကို Locker မာစတာနှင့်အတူ  ထူးခြားသောသော့ခတ် themes များ
app ကိုလုံလုံခြုံခြုံသော့ခတ် app ထဲမှာ 10 ထူးခြားသောအကြောင်းအရာများထက် ပို. သုံးပါ။
 ဖုန်းသန့်စင် & ဖုန်းကို Optimizer
စင်ကြယ်သော junk နှင့်ဤသော့ခတ်လက်ဗွေ apps နှင့်အတူယနေ့ဖုန်းရဲ့ internal memory ပိုကောင်းအောင်။
ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှောက်လွှာ Locker app ကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကာကွယ်ပါ။ ဤသတင်းစကားကို Locker app ကို & အဆက်အသွယ် Locker app ကိုနှင့်အတူ, သင်တို့သည်နောက်တဖန်အချက်အလက်များ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်များနှင့်လျှို့ဝှက်စိုးရိမ်လိမ့်မယ်။
သင်သည် app password ကိုသော့ခတ် app ကို အသုံးပြု. မဆိုအခက်အခဲရှိပါကacomment ထားခဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်တုံ့ပြန်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဗွေသော့ခတ် app ကိုထောကျပံ့ဖို့5* ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
App ကို Locker ရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာစမတ်ဖုန်း၌သင်တို့၏ app ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။ ဒီဗားရှင်း 2.0.5 ခံစားပါ။
App ကို Locker လက်ဗွေ & Password ကို, ပြခန်း Locker
11.51 ကို MB